मेरी लुखुरी | मझेरी डट कम
kbs — Mon, 08/31/2009 - 08:25
तपाईंकी कस्ती छिन् ? मोटी छिन् कि छरिती ? भच्याक छिन. कि सुकसुकाउँदी ? डणाँक छिन् कि लुरी ? डरलाग्दी छिन् कि माया लाग्दी, भयानक छिन् कि कल्कुलाउँदी ? एक क्विन्टलकी छिन् कि एक मुठ्ठी कि ? कराईजस्ती काली छिन् कि हिउँजस्ती गोरी ? चार हात कि छिन् कि एक बित्ता कि ? भकुण्डी छिन् कि ख्याउटी ? चेप्टी छिन् कि लाम्ची ? सुन्तली छिन् कि टर्री ? कस्ती छिन् तपाईंकी प्राण पियारी अर्थात् श्रीमती ? मेरी त लुखुरी छन् ।
काठमान्डूमा स्नातकको अन्तिम परीक्षाको तयारी गरिरहेको थिएँ, अचानक पहाडबाट बुबा सिकिस्त विरामीको खबर आएर कुदाकुद गर्दै गाउँ पुगेको त बूढा त टाठा, धाँईधुईं गरेर गाई पो दुहिरहेका । काठमान्डूमा एक्लै बस्दा बिगि्रन्छ रे भनेर केटीसेटी ठीकठाक पारेर बिहे गर्न पो बोलाएका रहेछन् । केटाकेटीमै बूढाले आफ्नो एउटा साथीलाई उनको छोरीलाई बुहारी बनाएर ल्याउने वचन दिएका रहेछन् मलाई च्याप्प पारेर इज्जतसिज्जतको कुरा गरेर स्वास्नी भिडाइदिहाले । मलाई केटीसेटी पनि देखाएनन् । बिहे गरेको भोलिपल्टै पठाई बिग्रेला रे भनर दुलही अगाडि लगाई मलाई काठमान्डू धपाई पनि दिए । मलाई बूढाले सोच्ने, केही भन्ने कुनै मौका दिएनन । म लुरुलुरु गुन्टा र दुलही अगाडि लगाउँदै काठमान्डू आइपुगेँ ।
काठमान्डू आएपछि पो मैले विचार गरेर श्रीमतीलाई हेरेँ । बूढाले त मलाई खुत्रुक्कै पारेका रहेछन् । मेरी श्रीमती त फिस्टी चरीजस्ती पो रहिछन्, फु गर्दा ढल्लिन जस्ती । म आफू पाँचफिट दश इन्च अग्लो मान्छेकी दुलही साढेचार फिटकी । कम्मर त जम्मा जम्मी एक मुठ्ठीको । मसँग हिँड्दा केटाकेटी हिँडेकोजस्तो । परेन फसाद ! बूढाले घाँडो भिराइदिहाले । अब के गर्नु र ! बाउको विरुद्ध जाने न संस्कार नै थियो न आँट । सुनमा सुगन्ध भनेकोजस्तो मेरी लुखुरीको अर्कै महान विशेषता थियो, निस्पट्ट, निरक्षर । म बहुलाउन मात्र सकिन ।
नयाँ बिहे गरेको, साथीभाईहरूले खान बोलाउन थाले । धेरैलाई टारेँ तर एउटा भोजमा नगई भएन । लुखुरीलाई पनि लिएर गएँ । मनमनै डर लागिरहेको थियो, के चर्तिकला देखाउने हो यसले आज भनेर । काठमान्डूको भोजभत्तेर कहिले देखेको भए पो । त्यसैले एउटा साथीकी दुलहीलाई जिम्मा लगाइदिएँ र ढुक्कको सास लिएँ । सब खाइरहेका थिए, उनी पनि हातमा प्लेट लिएर खाइरहेकी थिइन, जसोतसो गरेर । अचानक हलको पल्लो कुनाबाट उनी "हजुर हजुर" भनेर चिच्याउन थालिन् । सबैको ध्यान उनीतिरै आकृष्ट भयो । मेरो मुटुचाहिँ अब के उपद्रो गर्न थालिन् यिनले भनेर जोडजोडले धडकिन थाल्यो ।
मैले के भो भनेर उनीतिर हेरँे , हेर्नै पर्यो । उनको हातमा थियो न्यापकिन । त्यहि न्यापकिन बेस्सन हल्लाएर उनी सोधिरहेकी थिइन् "हजुर ! यो के गर्ने ? यो पनि खाने हो ?"
उनको कुरा सुनेर सारा गलल्ल हाँसे, मलाई चाहिँ कता लुक्न जाउँ जस्तो भयो । पछि घरमा आएर सम्झाएँ, हृवाँहृवा रुन थालिन् ।
मेरी लुखुरी मैयाँले अरु क्यै नजाने पनि पकाउन, ख्वाउन र घरधन्धा गर्न भने मज्जाले जानेकी थिइन् । त्यसैले हेाला, मेरो जीउ भने लाग्न थाल्यो । त्यो सम्म त ठीकै थियो तर बेलाबखत विचित्र विचित्रको उपद्रोले भने मलाई लाजमर्दो पार्न चाहिँ छोड्दिनथिन् ।
अब एक दिनको कुरा सुन्नुस् । एकदिन लुखुरी मैयाँलाई पनि काठमान्डू घुमाइदिनुपर्यो भनेर घुमाउन हिँडे । मोटरले किच्ला भनेर समातीसमाती घुमाएँ । पछि भोक लाग्यो होला विचरीलाई भनेर एउटा रामै्र रेष्टुरेन्टमा लगेँ । नाना भाँतिका खानेकुराहरू पिजा, बर्गर भएको ठाउँमा के खान्छेऊ भनेर सोधेको त समोसा जिल्फी पो भनिछन् । त्यतिबेला जिल्फी के पाउनु, समोसै ल्याउ भनेर अर्डर गरेँ । समोसा आयो, म काँटा चम्चाको सहयोगले खान थालेँ । उनले पनि मैले जस्तै गरेर समोसालाई चम्चाले काटेर खान खोजेकी, समोसा त बुदु्रक्क उपे्रर अगाडिको टेबुलमा बसेको भलादमीको नाकैमा लाग्यो । विचरो भलादमी यो के अचम्म भयो भनेर जिल्लिंदै थियो, मेरै लुखुरी दगुर्दै गएर टेबुलमाथि झरेको समोसा टिपेर आफ्नो टेबुलमा फर्किन्, केही नभएकोजस्तो गरेर । उता भलादमी रिसले जुरुक्क उठिसकेको थियो । म हत्त न पत्त उसको टेबुलनेर गएर क्षमायाचना गर्दै थामथाम थुमथुम पारेर आफ्नो टेबुलमा फर्कें र लुखुरीलाई घिसार्दै लिएर हिँडे । डेरामा फर्केपछि लुखुरी एक माना च्यूरा र नून खुर्सानी लिएर रुँदै खान थालिन् । मैले त एउटा समोसा खान भ्याएको थिएँ, उनी त भोकै थिइन् ।
लुखुरीको चर्तिकला कति बयान गरुँ । एकपटक एउटी दिदी पर्नेले बुहारीलाई लिएर आइज कि आइज भनेर साह्रै कराउनु भो जति टारे पनि टार्न सकिँन । "आज दिदीकहाँ जानु पर्छ, कोरीबाटी लुगा फेरेर बस्नु" भनेर अह्राएर हिँडे । पछि जाने बेलामा डेरामा आउँछु त लुखुरी त रामै्रसँग सिङ्गारपटार पारेर पो बसेकी रहिछन् । ठ्याम्मै मधेशतिर लोग्नेमान्छे आइमाई बनेर नाच्ने नटुवाजस्ती । मुख सेताम्मै, कमेरो दलेकोजस्तो । गालामा के दलेको हो, राताम्मै । ओठभरि त लिपिस्टिक लाएको हो कि के हो, जताततै पोतरेकोजस्तो । कपालमा हालेको तेल कन्चटमा चुहिरहेको थियो । त्यसमाथि बनारसी साडी । लुखुरी त सिङ्गारपटार गरेकी बाँदर्नीजस्ती देखिरहेकी थिई । त्यसमाथि मोटो न मोटो कोस तानेर लाएको गाजलले त झन् बौसी जस्तै लागिरहेकी थिई मेरी लुखुरी । म त तिनको रूप देखेर नहाँस्नै सकेँ न रुनै । उल्टो बरु आफ्नो कान समातेँ र तिनको आधुनिक भयङ्कर मेकअप पखाल्न लगाएर घरमै थच्चिएँ, दिदीकहाँ गइन ।
अब मेरी लुखुरीको पहिलो तीजको कथा सुन्नुस् । तीजको दिन निराहार पानीसमेत नखाएर वर्त बस्दिन । ए बाबा, एक मुठ्ठीको ज्यान छ, जल विनियोजन होला, पानी चाहिँ खाऊ भन्दा मरे मानिन् । दिउासो पशुपति लग्दे भनेर जिद्दी गरिन्, लग्दिनै पर्यो । एक्लै घाउ भनूँ, हराउलिन् भन्ने पीर । पशुपतिमा उनी पंक्तिमा लागिन् आफू के गर्नु !आइमाइको नाच हेर्न थालेँ । कति हेर्नु नाच । पाँच घण्टा कुर्नु पर्यो । लाइनमै ढलिन् कि भन्ने पीर उक्तिकै । बल्ल तल्ल असिनपसिन हुँदै आइपुगिन्, थकित मुद्रामा । म नाच हेरिरहेको थिएँ, उनलाई पुगियो । उनी पनि नाच्न थालिन् । जे होस् लुखुरी नाच्न चाहिँ गजब नाच्दी रहिछन् । जीउमा तागत छैन, अब ढल्लिन् तब ढल्लिनजस्ती भैसकिन् न नाच्न छाड्छिन्, न घर हिँडछिन् । आजित भएर जर्बदस्ती समातेर नाचबाट निकालेँ र एउटा ट्याक्सीमा चढाएँ । ट्याक्सीमा चढाएँ पनि, लुखुरी त लत्र्याकलुत्रु्क परेर बेहोसै पो भइन । मारेन । त्यहाँबाट डेरा जानुसाटो अस्पताल पुर्याएँ, रातभरित पानी चढाएपछि बल्ल तङ्िग्रन र बिहान डेरा पुगेँ ।
जब मैले स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणीमा उत्तिर्ण गरेँ, लुखुरी साह्रै दङ्ग परिन् । मन्दिर गइन्, भाकलको लड्डु चढाइन् र मलाई लड्डु खवाउँदै विस्तारै भनिन् "मैले पनि पढ्न पाए हुन्थ्यो " म दङ्ग परेँ ।
आज मेरी लुखुरी मेरो साम्राज्यकी एकाधिकार माल्किन, दुई छोराछोरीको सजग अभिभावक एउटा बुटिक चलाउँछिन र मलाई आफ्नो इशारामा नचाउँछिन् र म सगर्व उनकै वरिपरि नाच्छु रमाउँछु ।
एक जोडी आँखाहरु
आठ हाइकु (बिदेशी भूमि)
शहिदको लस्करमा देखे तिमीलाई
भेटिनु छुट्टिनु त के हो र
योगमाया सम्झिएर 'पानी, योगमाया र इन्द्रेनी'
मुम्बई ब्लास्ट हुनुअघि
पीडित नारीको वेदना
गरुँ कि मिठो भूल
विशाल किराँत प्रदेशको दुर्दान्त शिकारी शासक
आँफू मात्रै ठूलो हौ भन्छ किन मान्छे
समयको गति कसैले लाँदैन
लायन्स क्लव हेटौडाद्वारा एकल गजल सन्ध्या तथा सर्जक सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
मायाले बाँध तिमी मलाई
राजीनामा तु चाहियो
नबुझिने भाषा कस्तो बोल्दैछ यो बर्षात
हारपछि जितेको राम्रो
जीवनका गोरेटोहरू रहेछ